Isisindo | May 2022
Main > Isisindo
isisindo isisindo isinqumo ngonyaka omusha
Isisindo isisombululo sonyaka omusha - isisombululo
Ngisigcina kanjani isinqumo sami sonyaka omusha sokunciphisa umzimba? Izindlela Ezi-7 Zokunamathela Esinqumweni Sakho Sonyaka Omusha Wokulahlekelwa Isisindo Ukuqonda izinhloso zakho nokuthi yini edingekayo ukufika lapho kwesinye isikhathi kungaba yingxenye yempi. Thola Umphakathi Osekelanayo. Hlanganisa i-H2O yakho. 4. # Ziphathe. Hlala Ukhuthele. Ungadikibali.
isisindo se-emonda sl6
Isisindo se-Emonda sl6 - izixazululo ezingaba khona
Ngakanani isisindo sohambo lwe-Emonda? 698 amagremu
ukudla kwasekuseni ukunciphisa umzimba
Ukudla kwasekuseni ukunciphisa umzimba - isisombululo
Yikuphi ukudla okusiza ukushisa amafutha esiswini? Kepha empeleni kukhona inani lokudla okulungele ukunambitheka kwakho kanye nokhalo lwakho. Zikusiza ukuthi ulwe namafutha esiswini. Izithelo zipakisha ama-milligram angama-422 we-potassium, amaminerali angasiza ukukhawulela inani le-sodium yokuvuvukala kwesisu emzimbeni wakho. Amajikijolo. Ubisi Olunamakhekhe Akashokholethi. Itiye eliluhlaza. amawolintshi. Izinhlamvu Eziphelele. 17. 2011.
ukuzivocavoca umzimba okufushane
Ukuvivinya umzimba okufushane - izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Ungakwazi yini ukwakha imisipha ngokusebenza okufishane? Ukusebenza okufushane kuyindlela enhle ezinsukwini lapho ufuna ukugxila ku-cardio, kepha ufuna ukufaka inqubo yokupompa imisipha esheshayo osukwini lwakho. Yakha imisipha: Ukuze uthole izingalo ezinkulu noma i-glutes kuzofanela usebenze kancane ngaphezulu kwemizuzu eyi-10 ngosuku. Ukuze uthole ugqozi hlola izivivinyo zomzimba ezisindayo zeqembu ngalinye lezicubu.
izimpawu zokuqala zokwehlisa isisindo
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uqaphele ukwehla kwesisindo? Ukwehla kwesisindo okubalulekile nokuzuza kwemisipha kuzothatha cishe amasonto ayisishiyagalombili ukubona, noma kunjalo, noma ngabe ungaboni ncazelo yemisipha, izinzuzo ezenzeka emzimbeni nasengqondweni yakho zinkulu. Izingubo zakho zizolingana kangcono, ukuma kwakho kuzoba ngcono futhi uzohamba ubude, kusho uSharp.
ukwenza ukuya endlini yangasese kusiza ukunciphisa isisindo
Ingabe ukuya endlini yangasese kuyasiza ukunciphisa umzimba - imibuzo nezimpendulo ezibalwe kuhlu
Ingabe kufanele uzilinganise ngaphambi noma ngemuva kokuphuma? Ngakho-ke ngenkathi kungenzeka ukuthi usuvele uyazi ukuthi kungcono uzilinganise kuqala ekuseni ngaphambi kokuba udle noma usebenzise indlu yangasese kufanele futhi ungeze ipharamitha eyodwa ohlwini: ngaphambi kokugeza.
enza ama-amino acid akwenze ukhuluphale
Ngabe ama-amino acid akwenza uzuze isisindo - imibuzo efakwe kuhlu nezimpendulo
Ngabe ama-amino acid azodala ukuzuza kwesisindo? Ishicilelwe namuhla kwi-Nature Metabolism, ucwaningo olusha oluholwa izifundiswa ezivela e-University of Sydney eCharles Perkins Center, uSolwazi Stephen Simpson noDkt Samantha Solon-Biet, liphakamisa ukuthi ngenkathi beletha izinzuzo zokwakha imisipha, ukusetshenziswa ngokweqile kwama-amino acid (BCAAs) kunganciphisa isikhathi sokuphila,
ukuphakamisa isisindo somgibeli wamabhayisikili
Ukuphakamisa isisindo somgibeli wamabhayisikili - ungahlala kanjani
Ingabe abagibeli bamabhayisikili kufanele baphakamise izinsimbi? Kepha ukuqeqeshwa kwesisindo kungathuthukisa kakhulu ukusebenza kwakho ngebhayisikili. Ukumpompa insimbi akukuhle ngokugibela nje nokujaha nakho. Ukuphakamisa izinsimbi kusiza ukugcina ivolumu yemisipha njengoba ukhula ukuze ukwazi ukugibela ngokushesha futhi uqine eminyakeni edlule. 2017.
umkhawulo wesisindo se-uci
Umkhawulo wesisindo se-Uci - indlela yokuphatha
Kungani kunomkhawulo wesisindo se-UCI? Kushiwo umkhawulo wesisindo esincane esingu-6.8 kilogram obekwe yi-UCI ovimbela wonke amabhayisikili asetshenziselwe ukuncintisana nalesi sisindo. Lo mthetho-mgomo wasungulwa ngonyaka we-2000 njengendlela yokuqinisekisa ukuthi abenzi bawo abaphoqi ubuqotho bamabhayisikili nokuthi amaqembu ancintisane ngemishini efanayo.
umkhawulo wesisindo sebhayisikili le-uci
Umkhawulo wesisindo sebhayisikili le-Uci - izixazululo ezisebenzayo
Kungani umkhawulo we-UCI 6.8 kg? Kusho umkhawulo wesisindo esincane esingu-6.8 kilogram obekwe yi-UCI ovimbela wonke amabhayisikili asetshenziselwe ukuncintisana nalesi sisindo. Lo mthetho-mgomo wasungulwa ngonyaka we-2000 njengendlela yokuqinisekisa ukuthi abenzi bawo abaphoqi ubuqotho bamabhayisikili nokuthi amaqembu ancintisane ngemishini efanayo.
ukulahleka kwesisindo se-bob roll
Bob roll kwesisindo - isisombululo esisebenzayo
Ngabe uBob Roll unomdlavuza? Unenkinga enzima ngomdlavuza we-pancreatic, kepha uthathe isinqumo sokuwukhipha futhi amboze umjaho webhayisikili webhayisikili iTour de France. 2009.
ukudla umgibeli wamabhayisikili ukunciphisa umzimba
Ukudla kwamabhayisikili ukunciphisa umzimba - sesha izixazululo
Ngabe umgibeli wamabhayisikili we-pro wehlisa kanjani isisindo? Ngabe abagibeli bamabhayisikili abanciphisa kanjani isisindo? Izinzuzo eziningi zibala ngokucophelela amakhalori futhi zikala ukudla ukuqinisekisa ukuthi zithatha kuphela uphethiloli ezidinga ukwenza kahle ekuqeqesheni nasekugijimeni. Iphethini ejwayelekile yansuku zonke ukudla ibhulakufesi elilinganisiwe, ukugibela ukudla kwasemini usebenzisa imikhiqizo yamandla bese uthola ukudla okuyisisekelo ekuseni.
isisindo se-tarmac comp ekhethekile
Isisindo se-tarmac comp ekhethekile - izixazululo ezisebenzekayo
Singakanani isisindo setiyela esikhethekile? Ukumelana okuphansi, ukubamba okumangazayo, nokugibela okuncane kusondo elenziwe ngezandla elinesisindo esingama-gram angama-220 kuphela futhi lifaka ukuvikelwa kweBlackBelt.
amathiphu asebenzayo okunciphisa umzimba
Amathiphu asebenzayo okunciphisa isisindo - izimpendulo ezinkingeni
Nginganciphisa kanjani isisindo ezinsukwini eziyi-7 ekhaya? silandeleFaka izivivinyo ze-aerobic enkambisweni yakho yansuku zonke. Uma ufuna ukushisa amafutha ngokushesha akukho ukuzungeza ukuqeqeshwa kwe-cardio. Nciphisa ama-carbs acwengekile. Faka inhlanzi enamafutha ekudleni kwakho. Qala usuku ngesidlo sasekuseni esinamaprotheni amaningi. Phuza amanzi anele. Nciphisa ukudla kwakho usawoti. Sebenzisa i-fiber encibilikayo. 4. 2019.
umdlavuza isisindo sokulahlekelwa
Isilinganiso sokuncipha kwesifo somdlavuza - ungaxazulula kanjani
Uhlobo luni lomdlavuza olwenza ukwehla kwesisindo? Ngokwe-American Cancer Society, ukwehla kwesisindo okungachazeki kuvame ukuba uphawu lokuqala olubonakalayo lomdlavuza womphimbo, amanyikwe, isisu namaphaphu. Eminye imidlavuza, njengomdlavuza we-ovari, kungenzeka ukuthi ibangele ukulahleka kwesisindo lapho isimila sikhula sikhulu ngokwanele ukucindezela esiswini.
Ukudla okungu-5 okungafanele neze ukudle ukunciphisa umzimba
Ukudla okungu-5 okungafanele neze ukudle ukunciphisa umzimba - unquma kanjani
Yikuphi ukudla okungu-5 okufanele ungakudli? Nakhu ukudla okungama-20 ngokuvamile okungenampilo yize iningi labantu lingakudla ngokulinganisela ngezikhathi ezikhethekile ngaphandle kokulimala unomphela empilweni yazo. Ama-pizza amaningi. Isinkwa esimhlophe. Iziphuzo eziningi zezithelo. Izinhlamvu zokudla kwasekuseni ezinoshukela. Ukudla okuthosiwe, okugazingiwe noma okwosiwe. Amakhekhe, amakhukhi, namakhekhe.
sonya eddy kwesisindo
Sonya eddy kwesisindo - uxazulula kanjani
Ngabe uSonya Eddy unesifo sikashukela? Uvezwe ngumlingisi uSonya Eddy selokhu kwaqala abalingisi ngoMashi 3, 2006. U-Epiphany ubengumhlengikazi oyinhloko eGeneral Hospital selokhu kwaqala lo mlingisi. Kuvezwa ukuthi i-Epiphany yatholakala ukuthi inesifo sikashukela sohlobo II ngonyaka ka-2016.
isisindo esijwayelekile sobuchopho
Isisindo esijwayelekile sobuchopho - imibuzo ejwayelekile
Siyini isisindo sobuchopho bomuntu ku-KG? Ubuchopho bomuntu omdala bunesisindo esilinganiselwa ku-1.5 kg (3.3 lb). Emadodeni isisindo esijwayelekile silinganiselwa ku-1370 g kanti kwabesifazane cishe ngo-1200 g.
izinhlungu zendlala ze-ghrelin zokwehla kwesisindo kanye nokugcinwa
Izinhlungu zendlala ze-ghrelin zokwehla kwesisindo nokulondolozwa - ukuthi ungabhekana kanjani nazo
Ngabe i-ghrelin ikwenza ulambe noma ikushiye uzizwa wanelisekile? IGhrelin yihomoni ekhiqizwa futhi ikhishwe ikakhulukazi isisu ngamanani amancane akhishwe ngamathumbu amancane, amanyikwe nobuchopho. IGhrelin inemisebenzi eminingi. Ibizwa ngokuthi yi-'hormone yendlala 'ngoba ivusa isifiso sokudla, ikhuphula ukudla futhi ithuthukisa ukugcinwa kwamafutha.
ukuqeda ubisi kukusiza wehlise isisindo
Ingabe ukususa ubisi kukusiza wehlise isisindo - ukuthi ubhekane kanjani
Kungani ubisi lungalungile ekwehliseni isisindo? Ubisi bukhuthaza ukwehla kwesisindo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi labo abanokushoda kwe-calcium banesisindo esikhulu samafutha futhi bathola ukulawula okuncane kokudla kwabo.